7 Tanàna tsara indrindra any Eropa mba hitsidika ireo mpivahiny zokiolona | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Tanàna tsara indrindra any Eropa mba hitsidika ireo mpivahiny zokiolona
7 Tanàna tsara indrindra any Eropa mba hitsidika ireo mpivahiny zokiolona
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
Fotoana famakiana: 6 minitra
(Last Nohavaozina: 06/02/2021)
Manana kolontsaina sy tantara manankarena indrindra i Europe, mahatonga azy io ho toerana fialan-tsasatra malaza eo amin'ireo mpivahiny zokiolona. Museums, parks, mari-tany mahatalanjona, ary safidy fisakafoanana marobe. Raha afohezina, raha misotro ronono ianao dia misy fomba mahafinaritra maro hanalefahana ny tenanao any amin'ny tanàna rehetra any Europe. Na izany aza, tanàna vitsy dia mora hivezivezy ary mahita ireo zokiolona mpivahiny. Rehefa mikasa ny fialan-tsasatrao any Eoropa ianao, izay tokony hoeritreretin'ny mpandeha zokiolona rehetra dia ny haavon'ny fahasalamanao, fidirana amin'ny lehibe manintona sy ny fiaraha-mientana, ny fitaterana tsara indrindra, ho fanampin'ny teti-bola sy ny fialan-tsasatra.
Noho izany, izahay dia naka vitsivitsy tamin'ireo tanàna tsara indrindra hitsidika tany Eropa ho an'ireo mpivahiny zokiolona. Noho izany, azonao atao ny manaraka ny dianay ao amin'ny 7 tanàn-dehibe any Eropa.
Train Travel dia fomba iray mety sy mahaliana amin'ny tontolo iainana. Thny lahatsoratra voasoratra mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Taratasy fiaran-dalamby mora indrindra Tranonkala eto amin'izao tontolo izao.
1. Tanàna tsara indrindra any Eropa mba hitsidika ireo mpivahiny zokiolona: Roma, Italia
Roma dia tanàna lehibe hitsidika any Eropa ho an'ireo mpivahiny zokiolona. Tao amin'ny tanànan'ny Roma taloha, ankamaroan'ireo atahorana, trano fandraisam-bahiny, ary trano fisakafoanana dia azo alaina tanteraka ho an'ny be taona amin'ny seza misy kodiarana. Midika izany fa ny sisin'ny sisin-tanàna dia samy manana hantsana ho an'ny seza misy kodiarana daholo, ary lemaka ny tanàna, ka na manao ahoana na manao ahoana ny fahasalamanao, ho hitanao fa mora dia mandehandeha fotsiny.
Na dia somary mibabaka ao Roma aza i Roma, raha mandeha amin'ny vanim-potoana, in fall, ohatra, mila manana an'i Roma ianao irery tanteraka. Ankoatry ny, ny trano fandraisam-bahiny sy ny vidin'ny dia dia mirona amin'ny fihenan-taona, Ary, tsy mila manahy momba ny manofa fiara ianao, satria afaka nankany Roma mora foana ianao avy amin'ny toerana rehetra any Europe amin'ny lamasinina. Tsy misy zavatra tsara kokoa noho ny fiaran-dalamby Tsidika amin'ny lamasinina avo lenta sy haingam-pandeha avo lambo Trenitalia. Ankoatra ny fampiononana sy ny serivisy amin'ny lamasinina, afaka mahazo fihenam-bidy manokana amin'ny tapakila fiaran-dalamby ho an'ny zokiolona ianao.
Milan ho any Roma amin'ny fiaran-dalamby
Florence ho any Roma amin'ny lamasinina
Pisa ho any Roma amin'ny fiaran-dalamby
Naple ho any Roma tamin'ny lamasinina
2. Milan Ao Italia
Duomo sy Leonardo De Vinci's 'The Last Supper' dia manao an'i Milan ho paradisa ho an'ireo tia zavakanto sy tantara. Ankoatra ny maha-marika mpanao maritrano, Milan dia sariaka be amin'ny mpisava lalana zokiolona ary nahazo fandresena a 2016 Fandraisana an'ny EU. Noho izany i Milan dia iray amin'ireo tanàna tsara indrindra hitsidika any Eoropa ho an'ireo mpivahiny zokiolona.
Raha nandalo ny faha-60 taonanao ianao ary vonona hanana fiainana mahafinaritra, dia hanana fotoana tena mahaliana ianao any Milan. The italiana nahandro, ny mahatalanjona trano an'ny Basilicas, fampirantiana zavakanto, ary ny tranombakoka dia hahatonga anao hahatsapa ho mpanjaka. Rehefa ao Milano, tokony hiaraka amin'ny kilasy mahandro pasta ianao satria tsy tara mihitsy hianatra ny làlana soja tonga lafatra mba hahafahanao mamorona la dolce vita any an-trano..
Bologna mankany Milan amin'ny fiaran-dalamby
Florence mankany Milan amin'ny fiaran-dalamby
3. Tanàna tsara indrindra any Eropa mba hitsidika ireo mpivahiny zokiolona: efa nampiasaina, Belzika
Misy ny milaza fa Bruges no tanàna amin'ny medieval efa voatahiry tsara indrindra any Eropa. Làlan-tsoavaly, trano maro loko, Ny maritrano ara-Gothic, rehetra dia manao Bruges toerana fitetezam-paritany lavitra any Eropa ho an'ny mpandeha zokiolona. Ary, misy lakandrano izay ahafahanao manao cruise sy ankafizin'i Bruges nefa tsy manao dingana akory, traikefa ankasitrahan'ny zokiolona rehetra. fa, raha mbola tianao kokoa ny hahita an-tongotra an-tongotra an-tongotra, tsy misy ahiahy, Bruges dia tanàna tena marefo. Noho izany, mety tsara ho an'ny mpandeha zokiolona amin'ny sehatra mety ho ara-pahasalamana rehetra.
Tokony hanokana farafaharatsiny ianao 3-4 andro andiany hiampita 80 ny lakandrano an-tanàna ary miala sasatra any amin'ny farihy Minnewater. Ny hetsika lehibe iray hafa ao Bruges dia ny tsena ho an'ny fivarotana souvenir ho an'ny fianakaviana.
Ny foibe fiaran-dalamby ao Bruges dia manodidina 10-20 minitra’ mandeha avy ao afovoan-tanàna, mba hahafahanao mandehandeha any Belzika sy UK.
Brussels mankany Bruges amin'ny alàlan'ny fiaran-dalamby
Antwerp mankany bruges amin'ny lamasinina
Brussels mankany Vienna amin'ny alàlan'ny lamasinina
Ghent to Bruges amin'ny alàlan'ny lamasinina
4. Baden-Baden, Alemaina
Miaraka amin'ny lamasinina avy any Paris, Basel, Zurich, ary Munich, Ny tanànan'i Baden-Baden dia tena azo ampiasaina amin'ny mpivahiny zokiolona. Raha tsy tanànan'ny cosmopolitan lehibe toa an'i Berlin izany, izy io no fototry ny fiainana tsara tarehy. Any Alemaina no fonenana 900 trano fandraisam-bahiny, fa ny trano fandraisam-bahiny sy ny kilasin'i Baden-Baden dia nanakorontana azy rehetra.
Fialan-tsasatra amin'ny spa amin'ny Baden-Baden no safidy fialan-tsasatra tonga lafatra ho an'ny mpandeha zokiolona any Eropa. Ny hazakazaka mangina, fitsaboana fitsaboana mineraly sy fotaka, zaridaina tsara tarehy toa ny Paradies, mamorona sombin-danitra iray. Na izany aza, raha tianao ny mijanona ho mavitrika amin'ny fialantsasatra, avy eo misy golf sy klioba fanatanjahantena ao Baden-Baden ho anao mitsidika.
Ireo mpivahiny zokiolona any Eropa dia mety hahita ny ankamaroan'ny tanàna miatrika fanamby mandehandeha, noho ny havoana sy be lalana. Noho izany, dia tena ilaina ny mahatakatra raha ny tanànan'ny nofinofinao no tsara indrindra amin'ny herinao ara-batana. Ny fitsangatsanganana any amin'ny tanàna tsara tarehy indrindra any Eropa dia manan-danja tahaka ny fiantohana fitsangatsanganana. Ny tamponay 7 tanàna hitsidika ireo lisitry ny mpitety zokiolona dia ahitana ireo tanàna mora idirana indrindra any Eropa ho an'ny be taona.
Berlin mankany Baden-Baden amin'ny lamasinina
Munich mankany Baden-Baden amin'ny lamasinina
Zurich mankany Baden-Baden amin'ny lamasinina
Basel mankany Baden-Baden amin'ny lamasinina
5. Tanàna tsara indrindra any Eropa mba hitsidika ireo mpivahiny zokiolona: Berlin, Alemaina
Ny tranom-bakoka sy mari-tany mifandraika amin'ny WWII sy ny ady mangatsiaka, manao an'i Berlin ho toerana mahafinaritra ho an'ny mpandeha zokiolona any Eropa. Berlin dia fisaka ary tena be ny fitateram-bahoaka, na ny fiara fitateram-bahoaka na ambanin'ny tany. Raha olona salama tsara ianao, Afaka nandinika ny tanàna tamin'ny fizahan-tany Segway ianao.
Ny zaridaina maitso maro ao Berlin dia tonga lafatra amin'ny fitsangatsanganana sy fitsangatsanganana amin'ny tolakandro, ary ny zavakanto zavakanto dia safidy lehibe raha aleonao hetsika milamina sy kolontsaina kokoa noho ny hivezivezy ilay ivontoerana be olona.
Frankfurt mankany Berlin amin'ny lamasinina
Copenhagen mankany Berlin amin'ny lamasinina
Hanover mankany Berlin amin'ny Train
Hamburg a Berlin tamin'ny lamasinina
Miaraka amin'ireo fantsona mahafinaritra, Amsterdam dia toerana fitsangatsanganana be dia be foana ho an'ireo mpivahiny zokiolona any Eropa. Amsterdam dia iray amin'ireo tanàna tsara indrindra hitsidika ny The Netherlands, misaotra ny vibe sy ny habeny tony. Somary kely ny Amsterdam raha oharina amin'ireo tanàna eropeana hafa, ka tsy mila mihazakazaka ianao ary manahy momba ny fitsangatsanganana.
Raha reraka ny tanàna sahirana ianao, mitodi-doha ivelan'ny tanàna mankany amin'ny milina malaza na tulip saha, raha mandeha amin'ny lohataona. Na raha endrika tsara ara-batana ianao, manofa bisikileta sy ny bisikileta manodidina ny tanàna manintona dia hevitra mahafinaritra.
Bremen mankany Amsterdam amin'ny lamasinina
Hannover mankany Amsterdam amin'ny lamasinina
Bielefeld mankany Amsterdam amin'ny lamasinina
Hamburg mankany Amsterdam amin'ny lamasinina
7. Tanàna tsara indrindra any Eropa mba hitsidika ireo mpivahiny zokiolona: Vienna, Aotrisy
Ny maritrano mahagaga, opéra, ary ny lapan'ny emperora dia manome an'i Vienna ho toerana fitsangatsanganana mahafinaritra ho an'ireo mpandeha zokiolona. Raha tratranao io vanim-potoana momba ny ahiahy io dia afaka miverina sy mankafy ny vokatry ny asa mafy, avy eo dia mandehana any Vienna. Ary, Vienna no tanàna faharoa azo trandrahana indrindra any Eoropa ho an'ireo mpizahatany zokiolona izay tsy manam-petsy entona.
Ny trano fisotroana kafe Australiana dia mamorona mofomamy sy Schnitzel Australiana, manome antoka fa hanana traikefa culinary tsy hay hadino ianao. Ho an'ny ampahany ara-kolotsaina mitsangatsangana ny tranobe opera manaitra. Sady koa anie, Tany i Vienna sy i Schubert no namorona ireo singa tsy mampino, ny tanànan'ny mozika sy ny zavakanto.
Ny lapa Belvedere dia iray amin'ireo toerana tsy maintsy jerena ao Vienna, voahodidina fehezam-boninkazo sy loharano, Toerana hipetrahany sy hankafizana izy io.
Ny tanàn-dehibe dia marina 5 minitra miala amin'ny gara foibe. Noho izany, raha tonga avy any amin'ny firenena akaikinao ianao, Tsy misy zavatra mora kokoa noho ny fitsangatsanganana any Vienna.
Salzburg mankany Vienna amin'ny alàlan'ny lamasinina
Munich mankany Vienna amin'ny lamasinina
Graz mankany Vienna amin'ny alàlan'ny lamasinina
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao hahita ny tapakila tapakila fiarandalamby mora indrindra sy lalan-kaleha mankany amin'ny tanàna rehetra ao anaty lisitray.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “7 Tanàna tsara indrindra any Eropa mba hitsidika ireo mpivahiny zokiolona” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https: //www.saveatrain.com% Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Ao amin'ny rohy manaraka ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ity rohy ity dia ho an'ny teny Anglisy làlana fiantsonana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manolo ny tr to pl na nl sy fiteny maro voafidinao.
Europeforseniors Europeanniorsholiday europetravel Seniorseuropevacation Seniorstravel
10 Romantic Cities hitsidika In Alemaina
10 Streets tsara indrindra In Eoropa
Nandeha lamasinina, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby any Skotlandia, Fiaran-dalamby Spain, Train Travel UK, Travel Europe